I-USD/ZAR Isiphelo Sokulungiswa!
I-USD / ZAR pair yayikwisigaba sokulungisa emva kokufikelela kwinqanaba le-16.364. Iye yehla kakhulu kwinqanaba le-15.734 namhlanje apho ifumene inkxaso kwaye ngoku izama ukubuyela phezulu. Ngokusisiseko, i-USD ifumene uncedo oluvela kwi-US ADP Non-Farm Employment Change echazwe kwi-534K ngaphezu kwe-525K elindelekileyo.
Ukongezelela, i-ISM Manufacturing PMI yanda ukusuka kwi-60.8 ukuya kwi-61.1 amaphuzu. Nangona ukungaphumeleli kwayo ukufikelela kumanqaku e-61.3 njengoko kulindelwe, isalathisi sibhengeze ukwanda okuqhubekayo, oku kwakukuhle kwi-USD. Kwakhona, amazwi kaPowell okhetshe anokunyusa umqolo oluhlaza.
USD/ZAR Uhlalutyo lobuchwephesha!
I-USD / i-ZAR ayiphumelelanga ukuzinza phantsi kwe-38.2% yezinga lokubuyisela kunye nangaphantsi kwe-S1 yeveki. Ngokobuchwephesha, ibhalise ukuphuka kwamanga ngokuhlukana okukhulu ngaphantsi kwe-15.757 kwinqanaba elibonisa ukuba iinkunzi zeenkomo zingaphinda zikhokele.
Njengoko ndikuxelele kwi-webinar yam ephilayo (Phila iSeshini yoRhwebo) ngaphambili namhlanje, i-USD / i-ZAR inokuphuhlisa intshukumo ebalulekileyo ephezulu ukuba ihlala ngaphezu kwe-38.2% yezinga lokubuyisela kwaye ukuba yenza i-high high high, ukuvala ngaphezu kwe-15.922.
Ukungaphumeleli kwayo ukufikelela kwi-15.732 yemihla ngemihla ye-S1 kunye nokuphuka kwamanga kunye nokuhlukana okukhulu ngaphantsi kwe-15.757 yangaphambili ephantsi ibonakaliswe ukuba sinokuba nesantya se-bullish.
tags Forex, Uhlalutyo Technical, ukuseta urhwebo, Trading, USD / ZAR
Inkxaso ephambili: 14.80
Ukuchasana okuphambili: 15.08 - 15.20
IRandi ibetheke ngamandla xa ithelekiswa neUSD kule veki iphelileyo. Oku ayisiyiyo intshukumo eqhutywa yi-USD kuba sibone ukurhweba okungekho mkhombandlela kwiiveki ezimbalwa kwi-USD. Le yi-rally eqhutywa yi-ZAR kwi-USDZAR (ukwehla kwexabiso le-ZAR).
Izolo sibhengeze ngaphezulu kwe-100 pips kwirali ye-USDZAR kwaye namhlanje siphinda sinde kule marike ngokuphuma kwinqanaba elikhulu.
Inqanaba le-14.90 laliphezulu ngoSeptemba 20 kwaye emva kokuba ixabiso liphule phezulu eli nqanaba laliyisiseko sabathengi ababekhusela. Ubume be-bullish apha bomelele kakhulu kwaye unxantathu osicaba oprintwe ngexesha leseshoni ye-APAC usinike ukuseta ukuze sithenge ukomelela kwakhona.
Inkxaso ephambili: 14.65
Inkcaso ephambili: 14.90
Ndikhangela i-USD ende kwi-DXY ebuyela umva emva kovavanyo kwakhona lwe-August highs. I-USDZAR inika ithuba elihle kakhulu apha.
Emva kokuphulwa kwinqanaba le-14.68 kwiveki ephelileyo kunye nokubambisa iifutshane ze-USDZAR ziye zabuyela kule nqanaba.
Eli linqanaba lembali eliphambili le-MASSIVE kule marike kwaye ngoku lidibana ne-pivot yeveki kunye nokuphakama okuphezulu okwaphukileyo kwangaphambili.
Dip buys ngexesha lekhefu highs yanamhlanje kudlalwa; ngakumbi ngenxa yamandla e-USD kwi-bullish enokwenzeka umlenze.
Umahluko wexesha elifutshane we-bullish nawo uchongiwe usenza olu seto lubephezulu amathuba okuba nempumelelo. Ndijolise ekuphakameni kwayizolo okukwayisiseko esivavanyiweyo sangaphambili.